केपी शर्मा ओली प्रचण्ड पक्राउ चितवन मृत्यु अमेरिका सरकार प्रधानमन्त्री राशिफल नेकपा अपराध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल प्रहरी नेपाली काँग्रेस
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं, २८ जेठ। सुनको मूल्यमा फेरि वृद्धि भएको छ। आज (बुधबार) जेठ २८ गते सुन प्रतितोला ९०० रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ८८ हजार ६०० रुपैयाँ कायम गरेको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुनको…
सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान, आजको बजार भाउ कति ?
काठमाडौं, २७ जेठ। साताको तेस्रो दिन आज सुनको मूल्य दुई सयले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसारआज सुनको मूल्य प्रतितोला ८७ हजार सात सय रुपैयाँ पुगेको छ। जुन आजसम्मकै उच्च हो। सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ८७ हजार पाँच सय थियो।…
कोअपरेटिभ प्रेसिडेन्टस सोसाइटी कोप्सको अनलाइन बैठक सम्पन्न
काठमाडौं, २६ जेठ। सहकारी सञ्चालकहरुको साझा र छाता संगठन कोअपरेटिभ प्रेसिडेन्टस सोसाइटी कोप्सको अनलाइन अन्तरक्रिया एवं छलफल बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ। वर्तमान कोरोना महामारी संकटको समयमा उत्पादनमा वृद्धि र सहकारीको अर्थतन्त्रलाई कसरी…
काठमाडौं, २६ जेठ। सुनको मूल्य आज एकसय रुपैयाँ बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यसअघि आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला ८७ हजार चार सय रुपैयाँमा कारोबार…
काठमाडौं, २५ जेठ। साढे दुई महिनापछि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनचाँदी मुल्य तोकेको छ। लकडाउन कारण पसल बन्द भएपछि महासंघले गत चैत ११ गतेदेखि सुनचाँदीको मुल्य तोकेको थिएन। तर, आइतबारदेखि पसलहरु खुल्ने भएपछि महासंघले आजदेखि सुनको…
काठमाडौ, २१ जेठ। लकडाउन घोषणा भएको ७२ औं दिनमा व्यवसायीहरुले स्वतस्फुर्त रुपमा लकडाउनको उलङ्घन गर्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको आह्वानमा भोलि बिहिबारदेखि व्यवसायीहरुले पसल खोल्ने निर्णय गरेका हुन्। बुधबार बसेको महासंघको…